Maqaallada: Ka Hortagga Jiilaalka & Ka-hortaga wareejinta | Ka hortagga duqowda da'da ah, badhanka wicitaanka argagaxa, & Xalka GPS-ka wareejinta ee wareejinta Raadinta [Singapore / Jakarta]
SINGAPORE - Dadka waayeelka ah ee ku nool magaalada Singapore oo keligood nool, rag iyo dumarba, waxay leeyihiin fursada ugu badan ee ay u dhiman karaan, iyada oo ay ku nool yihiin hal qol ilaa saddex qol oo khatar sare leh marka loo eego kuwa ku nool guryaha noocaas ah . Kuwani waxay ahaayeen natiijooyinka daraasad sideed sano ah, qayb ka mid ah
Diisambar 26, 2016
Sameors 'dhaqdhaqaaqa iyo maalgelinta laga bilaabo 1 July 2013, $ 10 Miisaaniyadda dhaqdhaqaaqa waayeelka waxaa loo balaariyay $ 50 Miisaaniyadda dhaqdhaqaaqa iyo maalgelinta (SMF). SMF waxay hadda bixisaa taageero taariikhi ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah ee waayeelka ah, iyaga oo ka caawinaya inay sii wataan mobile iyo inay si madaxbannaan ugu noolaadaan bulshada dhexdeeda. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay taageero weyn oo loo fidiyo daryeelayaasha
Maarso 03, 2016
Tani waa fiidiyowga barnaamijka jimicsiga ee bartilmaameedsanaya Seniors 'Falls iyo Ka-hortagga Cawaaqibta. Barnaamijka waxa uu ka shaqeeyaa Degmada Nea Philadelphia - Chalkidona waxayna ku salaysan tahay Barnaamijka Jirka ah ee OTAGO, kaas oo diiradda saaraya Seniors 'Falls Prevention, waxaana lagu kobciyaa qaar ka mid ah Yoga iyo Tai - Chi.
Diisambar 02, 2015
Baaritaanka iyo qiimeynta khatarta ah in la dhaco Dadka waayeelka ah ee da'doodu tahay 65 sano ama ka weyn waa in la baadho halista halis sanadkiiba mar. Khatarta dhacdooyinka si dhakhso ah ayaa loo baari karaa iyadoo la hubinayo taariikhda dhacdooyinka sannadkii la soo dhaafay oo la qabtey imtixaanka Timed & go (TUG). Khatarta sare ayaa jirta
Liiska Qeybta Adeegaha Sare / Adeegaha Waayeelka ee Soomaliya Adiga Amar Dharka. Waxaanu sii balaarin doonnaa liiskan marka aan tagno. Adeeg Bixiyaha Adeeg Bixiyaha 247 Adeegyada Kalkaaliyeyaasha Guriga 8399 8420 Adeeg Bixiye Adeeg Bixiye A3 International Taageer 6272 6018 Abella Hay'adda 6744 8978 Xoghayaha Caalamiga ah ee Fursadaha Kobcinta 6536 0086 XNUMX Adam Road Medical
Waxqabadyada la beegsanayo qiimeynta iyo wax ka bedelidda khatarta guryaha guryaha waayeelka ah waxay muujiyeen waxtarka yaraynta halista (Feder, Cryer et al., 2000; American Geriatrics Society et al., 2001; Gillespie, Gillespie et al., 2003). Hawlgallada guriga dhexdiisa ah ayaa sidoo kale u oggolaanaya ka qaybgalka dadka waayeelka ah iyo kuwa ku dhow iyaga oo ka hortagga halista dhicitaanka.
Waxaa aad loogu talinayaa in la tixgeliyo xaaladda caafimaadka iyo heerka halista dadka waayeelka ah ka hor inta aan la soo bandhigin barnaamijka ka hortagga dhicitaanka. Dadka waayeelka ah ee ku fekeraya khatarta sare ee dhacaya, faragelinta shaqsiyaadka faragelinta ee shakhsi ahaaneed ayaa lagula talinayaa. Dadka waayeelka ah ee u muuqda khatarta dhexdhexaadka ah,
Qaar ka mid ah qorayaasha (Bonjour, Rapin et al., 1992; Delmi, Rapin et al., 1990) ayaa soo jeediyay in nafaqo-xumada waayeelka ah ay kor u qaadi karto khatarta jabka ee xilliga dayrta. Kuwa kale, iyaga oo isticmaalaya cabbirka jirka iyo xogta shaybaadhka, waxay heleen suurtagalnimada in ay dhacaan dadka ku yaraanta nafaqada (Vellas, Conceicao et al., 1990). Daraasada
Xogta ku saabsan dhacdooyinka dadka waayeelka ahi waa ficilka dilka ah ee dhulka ku dhaca. Falladu waxay la xiriiraan dareenka, dareemayaasha, lafaha iyo lafaha wadnaha (Dargent-Molina iyo Bréart, 1995) iyo dhacdooyinka sababay dhaawacyada ayaa sabab u ah geerida iyo cudurrada. Waayeelka, dhacdooyinka waa sababta ugu weyn ee
Inta badan dhaawacyada da 'wayn ayaa sababay hoos u dhaca. Tani waxay u horseedi kartaa murgashooyin isku mid ah, jabka lafaha iyo dhowr waxyeelood oo kale. Si looga fogaado dhacdadan AAOS (Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Orthopedic) waxay bilaabeen barnaamijyo dhowr ah kuwaas oo gacan ka geysan doona hagaajinta isu dheelitirka, awoodda, isuduwidda, iyo agility. Ka hortagga qaar ka mid ah